I-typography kunye nokubaluleka kwayo kuyilo lwegraphic | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Ukubaluleka kokuchwetheza kuyilo (izixhobo zoyilo)
UPablo Gondar | | Idizayini yeMifanekiso, Imithombo, Izibonelelo
La typography Uyilo lwegraphic ibisoloko ingumlingani onamandla xa isiza dlulisa imiyalezo. Ukususela ekuqalekeni kwayo kumaphephandaba e-Gutenberg, i-typography yangqineka isisiseko sonxibelelwano lwegraphic, sisixhobo sokuqala ukuba sisetyenziswe njengonxibelelwano lolwazi kokubini kwintengiso nakwezinye iindaba.
Ngenxa yayo yonke imbali kunye namandla abonakalise ukuba nawo xa uhambisa ulwazi sinokufumana namhlanje uninzi lwezixhobo zewebhu apho Khuphela iifonti. Kuya kufuneka sikhumbule ukuba uhlobo ngalunye lohlobo lohlobo lohlobo lolwakhiwo luyilelwe injongo ethile (uninzi lwazo lusetyenziselwa into enye) yiyo loo nto xa usebenzisa uhlobo lochwetheziweyo kufuneka sazi ukuba sihambisa ntoni kwaye yintoni injongo yethu kumyalezo ocacileyo.
Uhlobo lohlobo lokuchwetheza lunokusebenza njengophawu, olwahlukileyo oluzisa uthotho lweempawu ezinokubonisa iimvakalelo kunye nolunye uluvo xa lunxibelelana nommkeli womyalezo, kungenxa yesi sizathu kubalulekile ukwazi ukuba sifuna ntoni dlulisa kwaye umyalezo ubhekiswe kubani. Ngamanye amaxesha sinokufumana iifonti ezizodwa ezenzelwe ukuba ngumfanekiso weqonga lophawu, le yimeko yeelogo ezinefonti eyilelwe ngokucacileyo uphawu lwakho.
Xa sithetha ngamagama kufuneka sihlale sikhumbula iziseko zomyalezo ocacileyo: ukufundeka kunye nokusebenza. I-typography kufuneka ifundeke ukuze umyalezo uhanjiswe ngendlela efanelekileyo kwaye kwangaxeshanye usebenze ngaphakathi kulwimi olusetyenzisiweyo ngaphandle kokulibala ukuthobela iimpawu esifuna ukumela kuyilo lwethu.
Kubalulekile ukuba wazi ezinye ze iimpawu ezisisiseko zohlobo lochwethezokwaye inxibelelana njani kwindawo yemizobo ebekwe kuyo, kuba ayifani nokusebenzisa ifonti enomzimba omkhulu (onesibindi) kunokusebenzisa ifonti enomzimba osezantsi (ukukhanya), nganye kuzo idlulisela into eyahlukileyo Kwaye umahluko uphezulu okanye usezantsi ngaphakathi komyalezo. Umahluko lixabiso elisisiseko xa usenza ukucwangciswa kokuchwetheza, ulawulo oluchanekileyo lokuchwetheza kufuneka lusekwe ngokusekwe kwiimfuno zokubaluleka kwenxalenye nganye yesicatshulwa kuyilo, olona luchanekileyo kukusetyenziswa kweefonti zokuchwetheza ezimbalwa. Ukuba sifuna ukuseka ulawulo oluchanekileyo lokuchwetheza, ezinye iikhonsepthi ezisisiseko zinokusetyenziswa xa sisebenza nge-typography, kwifoto engezantsi sinokubona ezinye zezona ndawo zisetyenziswayo xa sisebenza ngombhalo kuyilo. Sikwabona ukuba uhlobo ngalunye luzisa njani uthotho lweempawu eziza kwenza umyalezo ocacileyo "ubengcono" okanye "umbi" ukuba usetyenziswe ngendlela engeyiyo.
Ulawulo olusisiseko lochwethezo.
Umzekelo wokusetyenziswa kwetheyipografi echanekileyo unokufumaneka kwiipowusta zemiboniso bhanyabhanya, le nkxaso ibonelela ngeendlela ezininzi ekubhekiswa kuzo kuhlobo lokuchwetheza. Ipowusta nganye inomsebenzi obanzi kakhulu wokufezekisa iinjongo zayo. Emva koko siza kubona eminye yemizekelo yokusetyenziswa kokuchwetheza kolu hlobo. Ungabona ezinye iiposta zemiboniso bhanyabhanya kule Kwiwebhu.
Uhlobo olulodwa lokuchwetheza olwenza uphawu kunye nolwahlukileyo.
Ubuchwephesha bedijithali obudityaniswe necalligraphic yokuthinta ubuqu.
Umahluko ngokuchwetheza ngombala kunye nobungakanani bohlobo lochwethezo.
Emva kolu vavanyo (olusisiseko) lokujonga amanye amanqaku asisiseko xa usebenzisa ifonti, sinokuqala ukukhangela iifonti kwezinye iibhanki zeefonti ezikhoyo kwi intanethi, ezi zibonelelo ziluncedo kakhulu xa kuyilwa. Kule posi siza kugqamisa omnye wabo (owaziwa kakhulu) DaFont.
DaFont Iqonga lewebhu elinentlobo ezininzi zeefonti kunye nekhathalogu eyalelwe ngesitayile, le nkqubo iluncedo kakhulu ekukhupheleni iifonti ngokukhawuleza kuba akukho mfuneko yokuba senze naluphi na uhlobo lobhaliso kwiwebhu ukukhuphela ifonti. Enye into ebalulekileyo, icandelo lezomthetho elibandakanya ukusetyenziswa kwefonti eyenziwe ngumntu wesithathu, ikhuselekile kwiwebhu ngenxa yecandelo apho sinokubona ukuba yeyiphi na ipropathi yabucala yamalungelo ohlobo ngalunye lwefonti. Kwinqanaba elisebenzayo liluncedo kakhulu kuba ine-injini yokukhangela apho sinokubhala khona nasiphi na isicatshulwa kwaye sibone ukuba sijongeka njani ngeefonti ezahlukeneyo, kuluncedo kakhulu ukuzama ukungazalisi iPC yethu ngamagama (kuhlala kwenzeka hehe). Emva koko siza kubona ezinye izikrini zale webhusayithi.
Ngolwazi olusisiseko olunikezwe ngokusetyenziswa kwetayipu kunye nesampulu yesixhobo esinamandla sokuchwetheza, sikulungele ukuqala ukuphanda ngehlabathi lokuchwetheza.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izibonelelo » Imithombo » Ukubaluleka kokuchwetheza kuyilo (izixhobo zoyilo)
UPeter NC sitsho
Inqaku elilungileyo, de ufike kwisindululo seDafont, itoti yokulahla inkunkuma.
Phendula u-Peter NC
Ukuba ungumlawuli wokuyila, umzobi okanye umphuhlisi wewebhu- nokuba yintoni na eluqeqeshweni, ubuchwephesha bubalulekile kuyilo. Kukho amakhulu eefonti ezihlawulelwayo nezasimahla ezifumanekayo kwezi ntsuku, kodwa xa kuziwa kuchwetheza ubugcisa, ngekhe uyeke ukufunda ngako okanye ukuphucula izakhono zakho zokuchwetheza.
Qhubeka uzenze ngokwakho kwinqanaba elilandelayo.
Ndivuma ngokupheleleyo, ubuchwephesha yenye yezona zinto zibaluleke kakhulu kwicandelo loyilo kwaye kubalulekile ukwazi ukuba ukhetha iifonti kuyilo ngalunye kwaye usebenzise ubunzima obahlukileyo ukwenza umahluko.
Kulunge kakhulu !!!
Ungandinika uluhlu lweencwadi
"Ndixelele ukuba uyintoni kwaye ndiza kukuxelela igama lakho" iilogo?
Ukuguqula iidola zaseMelika zibe ngumsebenzi ogqithisileyo